Banyere - Alietc.com
Alietc B2B n'ọma ahịa na-eme nke ọma na-ewetara ndị zụrụ ahịa, ndị na-eweta ngwaahịa na ndị nrụpụta si n'akụkụ ụwa niile, ọnụ n'otu ikpo okwu dị egwu.
Alietc dị iche na ahịa ahịa dijitalụ ndị ọzọ ama ama dị ka Alibaba, Amazon, Taobao, bụ isi n'ihi na ọ chọpụtawo adịghị ike nke usoro ụzọ ndị ahụ niile ma zere imehie otu ihe ahụ.
Uru kachasị elu nke Alietc bụ na anaghị ebido ego na azụmahịa, yabụ ndị na-azụ ahịa, ndị na-ebubata ya na ndị na-emepụta ya nwere ike itinye uche na ezigbo ala na-enweghị mgbagha banyere ịkwụ ụgwọ ọrụ.
Kama ịkwụ ụgwọ ọrụ na njedebe nke azụmahịa, Alietc na-akwụ ụgwọ maka aha ya ma depụta ngwaahịa ma ọ bụ debanye aha iji nye onyinye na ngwaahịa.
Enwere ihe abụọ maka ụgwọ ndị a. Nke mbu, o na achi achi na ndi na edeputa ma obu nye ahia maka ahia bu ezi ihe maka ime ahia. Nke abụọ, anyị chọrọ idowe ụgwọ maka ndị na-arụ ọrụ nke ikpo okwu. Dịka ọmụmaatụ, jiri nchịkọta ọnụahịa anyị na nke ndị Amazon bụ ndị na-akwụ ụgwọ ihe dịka 13% nke ọnụahịa ire. Anyị achọghị ka ụgwọ bụrụ ihe mgbochi ma ọ bụ ihe mgbochi mgbe a bịara n'ịzụ ahịa, anyị chọrọ ka ha bụrụ ihe mkpali!
Alietc anaghị enye naanị ikpo okwu ma hapụ gị, onye ọrụ, ka ọ rụọ ọrụ niile siri ike. Alietc na-arụsi ọrụ ike iji mee ka ndị dị ka onwe gị gaa na ikpo okwu, site na iji SEO nke ọma maka ngwaahịa niile edepụtara. Alietc bụ usoro ikpo okwu dị omimi ma dị nkenke n'ihi na ọ na-adọta ndị ọrụ ji obi ha niile na-azụ ahịa dị mma ma guzobe mmekọrịta ogologo oge.
Anyị kwukwara na nke a bụ 'ahịa mmekọrịta'. Nke a pụtara na anyị na-ekepụta obodo ebe azụmaahịa ebe nkwukọrịta dị mma bụ isi nke ọma. Nkwukọrịta ahụ abụghị naanị ịme oke azụmahịa, mana ọ na-ahapụ nzaghachi maka mmadụ niile ka ha hụ. Ihe kpaliri ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya bụ iwulite aha ọma na ogo na ntụkwasị obi, ebe ndị na-azụ ahịa ebumnuche kwesịrị ịbụ iji mezuo azụmahịa na ngwa ngwa, na-enwe ntakịrị nsogbu.
Can nwere ike chọpụta uru Alietc zuru ebe a:
Ma ị na-azụ ahịa na ngwaahịa eji emepụta ma ọ bụ nke eji ya eme ihe, isonyere na Alietc ahịa ahịa dijitalụ nwere ike ịdị mma maka azụmahịa. Ma ị na-ere ahia na ngwa ahịa dị ka ihe eji egwuri egwu, uwe ma ọ bụ kichin, ma ọ bụ na-ere na akụrụngwa dị ka bauxite na potash, ruo akwa na plastik.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ịzụta ngwaahịa, mgbe ahụ ị gaala ebe ziri ezi. Alietc bụ “Aladdin's Cave” nke bụ ezigbo ihe ọ bụla gbasara ngwaahịa ma ọ bụ akụrụngwa ị nwere ike iche n'echiche, na ọtụtụ ị nwere ike ịmabeghị na ọ dị.